अलविदा गुरु: प्रदिप घिमिरे - जागरण अनलाइन
अलविदा गुरु: प्रदिप घिमिरे
२०७५ पुष २६, बिहीबार २१:३४
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ पनौरा निवासी बाबु बासुदेव घिमिरे र आमा कमला घिमिरेको काखबाट वि.सं. २०४४ मंसिर १७ गते एक महान् हस्ति प्रदिप घिमिरेको जन्म भएको थियो । उहाँ सानैदेखि मिहिनेती र लगतशील हुनुहुन्थ्यो । प्रारम्भिक शिक्षा गाउँमै लिई उहाँले कक्षा सातसम्म दिपशिखा मा.वि.मा पढ्नु भएको थियो । त्यसपछि पद्मोदयबाट कक्षा १० पास गर्नु भएको थियो । उहाँ कक्षा आठमा सामुदायिक विद्यालय तर्फबाट जिल्ला प्रथम हुनुभएको थियो । साथै कक्षा १० मा जिल्लाकै दोश्रो हुनुभएको थियो ।
उहाँले प्लस टु विज्ञान विषयबाट काठमाण्डौं मोडेल कलेजमा प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गर्नुभएको थियो । लगत्तै दाङ आएर उहाँले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट विएस्सी उत्तिर्ण गरी एमएस्सी गर्न काठमाण्डौं प्रस्थान गर्नुभएको थियो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमएस्सी पास गरी करिब पाँच वर्ष दाङ आएर पढाउन थाल्नु भएको थियो ।
वनस्पती शास्त्र पढेर उहाँले घोराहीका ९ वटा कलेजमा पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, कृष्णसेन बहुप्राविधिक शिक्षालय, मदन भण्डारी एजि कलेज, दिपशिखा क्याम्पस, सिद्धार्थ एकेडेमी, सञ्जिवनी कलेज, माउन्ट भ्यू, उच्च मा.वि. रझेना र चौघेरामा पढाउने गर्नुहुन्थ्यो ।
वनस्पती शास्त्रको दाङ जिल्लाको एक होनाहार शिक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँ । वास्तवमा दाङले एउटा शक्तिशाली अब्बल व्यक्ति गुमाउन पुग्यो र आज सारा दाङ शोकाकुल र स्तब्ध छ । उहाँलाई दाङको लमही र तुलसीपुर क्षेत्रका कलेजहरुको पनि बोलाओट थियो तर समय अभावका कारण उहाँले सबै ठाउँमा समय दिन सकिरहनु भएको थिएन ।
सम्पूर्ण विद्यार्थीका गुरु प्रदिप घिमिरे शिक्षक मात्र नभई एक सामाजिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अपार माया र शिक्षाका कारण उहाँ दंगाली विद्यार्थीहरु उहाँप्रति अरु शिक्षकभन्दा बढी निकट थिए । विद्यार्थीसँग बढी घुलमिल हुने, नजिकिने स्वभावले अझैपनि उहाँको यादमा धेरै चिन्तित छन् । दाङले एउटा कुशल महान् शिक्षक गुमाउँदाको पिडा दाङका लागि एउटा कालो दिन बनेको छ ।
प्रदिप घिमिरे नाताले मेरो फुपुको कान्छो छोरा हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगको निकटताले मलाई अझैपनि यो दुर्घटना सपनाझै लाग्छ । वास्तवमा मैले एउटा अभिभावक गुमाइरहेको भाव भइरहेको छ । उहाँको प्रेरणाको स्रोतले नै उहाँले मलाई विएस्सीमा वनस्पती पढ् भनेर पढ्न लगाउनु भएको थियो । यसको अतिनै माग छ बाबु पढ् भन्ने मान्छे गुमाउँदा साँच्चै नै बाधा हुँदोरहेछ ।
सबै लेभलका व्यक्तिहरुसँग उहाँ घुलमिल गर्नुहुन्थ्यो । उहाँमा मैले कहिल्यै पनि घमण्डीपना भेटेन । उहाँ सबैका लागि प्रेरणाका खानी हुनुहुन्थ्यो । आज म मात्र नभई सम्पूर्ण दाङले दुःख पोखिरहेको छ । सबैलाई रुवाएर आफुले जितेर जानुभयो उहाँले । उहाँको बारेमा जति लेखेपनि अपुरो नै हुन्छ ।
सबै काकु मध्ये मेरो प्रिय काकु प्रदिप घिमिरे सबैको मनमा बस्नु भएको थियो । खाना खाने समय नहुँदानहुँदै पनि कलम र प्रोजेक्टर बोकेर उहाँ कक्षाकोठामा पुगेर पढाउन कन्जुर गर्नुहुन्थेन । उहाँले मलाई सधै भन्नुहुन्थ्यो बाबु अरु सबै गर्नु तर झुठ कहिल्यै कहिँकतै नबोल्नु । आज उहाँले दिएको यो पाठ सम्झदा मन हलुङ्गो भएर आउँछ । उहाँले मलाई असाध्यै सहयोग र माया दिनुभयो ।
कहिकतै घुम्न जाँदा होस् या काममा जाँदा सँगै लगेर जाने व्यक्ति गुमाउँदा अवस्य नै मनमा पीडा हुँदोरहेछ । दिनमा एकपटक भेट नगरी उहाँसँग म बस्ने सक्दैनथे । उहाँ अति नै मिजासिलो हुनुहुन्थ्यो । उहाँका शिक्षादिक्षा सबैका लागि महान् हुनेछन् । उहाँको कक्षामा बस्टा मात्रै धेरै कुरा जानिन्थ्यो, सिकिन्थ्यो । पठनपाठनका कुरालाई सधै उहाँले उदाहरणका साथ बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँकै पहलमा सबै कलेजका विद्यार्थीहरुले स्वतन्त्रताको अनुभव गर्दथजे ।
उहाँले कैयौपटक धेरै विद्यार्थीहरु लगेर बोटानिकल गार्डेन हेर्न कपुरकोट लगेर जाने गर्नुहुन्थ्यो । तर त्यही ठाउँमा उहाँको दुर्घटना भई उहाँको निधन भयो यो एकदमै रोदनको समय बनिदियो ।
कसैले कल्पना समेत गरेको थिएन यस्तो होला भनेर । आज एक मुल्यवान व्यक्ति गुमाउनुको पिडाले सबैमा उतारचढावको अनुभव भइरहेको छ । अझैपनि धेरै कलेजका विद्यार्थीले उहाँको तस्वीर कक्षाकोठामा झुण्ड्याई राखेका छन् । यसरी मनलाई थामि राखेका छन् । अझै कैयौं विद्यार्थीहरु कक्षा कोठामा पुग्दा आँशुका वर्षा खसाली राखेका छन् ।
उहाँको निधनले आज दाङ मात्र नभएर देश रोइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि शोक जाहेर ग¥यो । त्यो दिन दाङका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था शोकमा डुब्यो । चोकचोकमा दिप प्रजोलन र श्रद्धाञ्जली सभा भएर एकदमै राम्रो व्यक्तिको क्षतिले दाङ विकासका दृष्टिले वा शिक्षाका दृष्टिले अलि पछाडी पर्ने कुरा सर्वविदितै भयो । उहाँको अन्त्यष्टिमा आएको त्यो ठूलो भिडले नै स्पष्ट पार्छ उहाँ कतिको महान् र सरल हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा ।
प्रदिप घिमिरे वास्तवमा एउटा दाङ जिल्लाको खम्बा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सधैका लागि अमर रहनुभएको छ । उहाँका विद्यार्थीहरुले उहाँको सपना पुरा गर्नुपर्छ । यो अकल्पनीय दुर्घटनाबाट भएको ठूलो क्षति सबैका लागि सपना भएर गयो । केवल छोटो समयमा केही गरेर केही दिन उहाँ यस धर्तीमा आउनुभएको रहेछ । सबैलाई राम्रो शिक्षादिक्षा, मायाममता, साथसहयोग दिएर उहाँ हामीबाट विदा हुनुभयो । तर उहाँको आनीबानी, मायाममता सधै सम्पूर्ण दाङबासीलाई रहिरहनेछ । एक महान् गुरु प्रदिप घिमिरे, अलविदा गुरु !